Mifohaza! | 2011-05
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Arabo Boligara Cebuano Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Koreanina Kroaty Letonianina Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Serba Slovaky Slovenianina Soedoà Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Tsonga Zoloa
Ilay Firenena Matanjaka Fahafito
Miresaka momba an’ireo firenena matanjaka resahin’ny Baiboly ny Mifohaza!, ka ity no farany amin’ireo lahatsoratra fito misesy momba izany. Nosoratana ireo lahatsoratra ireo mba hampiharihariana fa azo itokisana ny Baiboly, avy amin’ny fanahy masina, ary mampanantena fa hifarana ny fijaliana vokatry ny fitondran’olombelona feno habibiana.
TENA miavaka ny vanim-potoana iainantsika. Amin’izao mantsy no miseho ilay firenena matanjaka fahafito, resahin’ny Baiboly. Nisy nifandraisany tamin’ireo tantara ao amin’ny Baiboly daholo ireo firenena enina teo alohany fa izy kosa tsy toy izany. Ny momba azy àry no azo lazaina hoe tena faminaniana. Niresaka mialoha momba an’ireo firenena matanjaka na “mpanjaka” fito ny Baiboly. Hoy izy: “Misy mpanjaka fito: Efa lavo ny dimy, ary ny iray mbola eo, fa ny iray kosa mbola tsy tonga, nefa rehefa tonga izy, dia hitoetra kelikely.” *—Apokalypsy 17:10.
“Efa lavo” ny dimy tamin’ireo “mpanjaka” na fanjakana fito rehefa nosoratana ireo teny ireo, 1 900 taona mahery lasa izay. Tsy iza izany fa i Ejipta, Asyria, Babylona, Media sy Persa, ary Gresy. I Roma ilay “mbola eo.” Tsy haharitra mandrakizay anefa izy io. Mbola hisy iray hafa handimby azy, izay “mbola tsy tonga”, araka ilay faminaniana. Tanteraka tokoa ilay faminanian’ny Baiboly satria niseho ilay “mpanjaka” fahafito. Iza izy io? Ho eo foana ve izy? Raha tsy izany, ahoana no hiafarany? Mamaly izany ny Baiboly.
Nanomboka niharihary ilay firenena matanjaka fahafito rehefa nihanatanjaka i Angletera, izay teo amin’ny sisiny avaratrandrefan’ny Fanjakana Romanina. Efa fanjakana matanjaka io nosy io, taorian’ny 1760. Nitombo foana ny harena sy ny tanjak’i Grande-Bretagne. Izy no firenena nanan-karena sy natanjaka indrindra, tamin’ny taonjato faha-19. “Ny Fanjakana Britanika no fanjakana nidadasika indrindra”, hoy ny boky iray, satria “372 tapitrisa ny mponina tao ary 28 tapitrisa kilaometatra toradroa mahery ny velaran-taniny.”
Nisy valandresaka ho an’ny mpanao gazety nataon’i David Cameron, praiminisitry ny Royaume-Uni sy Barack Obama, filohan’i Etazonia, tamin’ny Jolay 2010. Hoy ny filohan’i Etazonia: “Tsy ho vitantsika mihitsy ny tsy hilaza fa tena miavaka ny fifandraisan’i Etazonia sy Royaume-Uni. Manana lova iombonana isika ary manana fitsipika iombonana. ... Mety tsara ny fiarahantsika satria mampandroso tombontsoa iombonana. ... Milamina kokoa sy mandroso kokoa ny vahoakantsika sy ny vahoaka eran-tany, rehefa miara-miasa i Etazonia sy Royaume-Uni. I Grande-Bretagne no akaiky indrindra an’i Etazonia sady matanjaka indrindra, amin’ireo mpiara-miasa aminy.”
Lasa niaraka tamin’i Etazonia, zanataniny teo aloha, anefa i Grande-Bretagne noho ny Ady Lehibe I (1914-1918). Inona no vokany? Lasa firenena matanjaka roa sosona miteny anglisy ilay Fanjakana Britanika, ary maharitra hatramin’izao. Tsy iza izany fa ny Fanjakana Anglisy-Amerikanina.—Jereo ilay efajoro hoe “Mpiara-miasa Akaiky.”
Mifameno ny faminaniana ao amin’ny Apokalypsy 17:10 sy ny faminaniana iray ao amin’ny bokin’i Daniela. Nahita “sarivongana ngezabe” i Nebokadnezara mpanjakan’i Babylona, tao amin’ny fahitana nomen’Andriamanitra azy, ary nanoratra momba izany i Daniela. (Daniela 2:28, 31-43) Nohazavain’i Daniela tamin’ilay mpanjaka fa fanjakana mifandimby no asehon’ny vatan’ilay sarivongana, ka i Babylona izay firenena natanjaka tamin’izay, no voalohany. (Efa tsy natanjaka intsony i Ejipta sy Asyria.) Voaporofo ara-tantara ireto:
Ny Fanjakana Babylonianina no loha volamena.
I Media sy Persa no tratra sy sandry volafotsy.
I Gresy fahiny no kibo sy fe varahina.
Ny Fanjakana Romanina no ranjo vy.
Manondro ny fizarazarana ara-politika sy ara-tsosialy mandritra ny fotoana hanjakan’ny Firenena Matanjaka Anglisy-Amerikanina ny tongotra vy mifangaro tanimanga.
Milaza ny Apokalypsy 17:10 fa “hitoetra kelikely” ilay firenena matanjaka fahafito. Haharitra hafiriana izany? Ahoana no hahalavoany? Inona no hitranga aorian’izay? Manazava momba an’izany i Daniela.
Fampanantenana azo itokisana
Hoy i Daniela rehefa avy nanazava an’ilay sary: “Nisy vato nendahana [teo amin’ny tendrombohitra iray], nefa tsy nendahan-tanana. Ary namely an’ilay sary teo amin’ny tongony vy sy tanimanga ilay vato, ka nahatorotoro azy.” (Daniela 2:34) Inona no dikan’izany?
Hoy i Daniela: “Amin’ny andron’ireo mpanjaka [farany] ireo, dia hanorina fanjakana tsy ho rava mandrakizay ilay Andriamanitry ny lanitra, ary tsy ho lasan’olon-kafa izany fanjakana izany. Hotorotoroin’izy io sy hofoanany ireo fanjakana rehetra [etỳ an-tany], fa izy kosa haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra.” * (Daniela 2:44, 45) Mariho fa:
Tsy tanan’olombelona no “hanorina” an’ilay Fanjakana, na ilay vato lehibe, fa Andriamanitra mihitsy. Mety àry ny iantsoana azy io hoe Fanjakan’Andriamanitra.
‘Hotorotoroin’ny’ Fanjakan’Andriamanitra ny fitondran’olombelona rehetra, anisan’izany ilay firenena matanjaka fahafito. Nahoana? Tsy misy te hamoy ny fahefany izy ireo. Hanohitra an’Andriamanitra koa izy ireo amin’ilay ady lehibe farany any amin’ilay toerana an’ohatra antsoina hoe Hara-magedona. Milaza mazava ny Baiboly fa ny “mpanjakan’ny tany rehetra misy mponina” no handray anjara amin’io ady io.—Apokalypsy 16:13, 14, 16.
“Tsy ho rava mandrakizay” ny Fanjakan’Andriamanitra, tsy toy ireo fitondran’olombelona mandalo, anisan’izany ireo firenena matanjaka fito. Hanjaka amin’ny tany manontolo koa izy io.—Daniela 2:35, 44.
Niresaka momba ny Genesisy 3:15 ilay lahatsoratra voalohany momba ny firenena matanjaka fito. Hiavaka tokoa ny fahatanterahan’io faminaniana io, rehefa horinganin’Andriamanitra tanteraka ny mpanohitra azy. Hanorotoro an’i Satana, na ilay menarana, sy ny taranany i Jesosy Kristy, izay Taranak’ilay vehivavy. (Galatianina 3:16) Anisan’ny taranak’i Satana izay manahaka ny toetra ratsiny sy izay te hahaleo tena ka manohitra ny fitondran’Andriamanitra sy Kristy.—Salamo 2:7-12.
Rahoviana àry io fandringanana io no hitranga? Rahoviana tokoa ny Fanjakan’Andriamanitra, na ilay “vato”, no hanafoana tanteraka ny fitondran’olombelona rehetra? Mba hamaliana izany, dia misy “famantarana” omen’ny Baiboly, izay hanampy antsika hamantatra ny andro farany.—Matio 24:3.
Fantaro ireo “famantarana”
Anisan’izany famantarana izany ny ady eran-tany, ny “horohoron-tany lehibe”, ny “areti-mandringana”, ary ny “mosary.” (Lioka 21:10, 11; Matio 24:7, 8; Marka 13:8) Mampiavaka ny “andro farany” koa ny fitondran-tena faran’izay ratsy sy ny tsy firaharahana an’Andriamanitra. (2 Timoty 3:1-5) Efa mitranga ve “izany rehetra izany”? (Matio 24:8) Eny, ary lasa matahotra ny hoavy mihitsy aza ny olona. Hoy ny gazety Bolantany sy Taratasy (anglisy): “Mampahatahotra ny tombantomban’ireo filozofa malaza sasany mpandala ny siansa sy ny fiaraha-monina, izay milaza fa tsy hisy intsony ny olombelona.”
Diso anefa izy ireo satria tsy ho foana mihitsy ny olombelona. Azo antoka izany satria hanao zavatra ny Fanjakan’Andriamanitra. Hoy i Jesosy Kristy rehefa nilaza ny famantarana momba ny farany: “Hotorina maneran-tany ity vaovao tsaran’ilay fanjakana ity, ho vavolombelona amin’ny firenena rehetra, vao ho tonga ny farany.” (Matio 24:14) Ahoana no ahatanterahan’izany?
Mitory ny Fanjakan’Andriamanitra any amin’ny tany 230 mahery ny Vavolombelon’i Jehovah. Izao tokoa no lohatenin’ny iray amin’ny gazetin’izy ireo: Ny Tilikambo Fiambenana Manambara ny Fanjakan’i Jehovah. Anaran’Andriamanitra ny hoe Jehovah. (Salamo 83:18) Olona sy fianakaviana maro no niova ary nanaraka ny fitsipik’Andriamanitra ka lasa nadio fitondran-tena sy tia fihavanana, rehefa nianatra Baiboly tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah. (1 Korintianina 6:9-11) Olona an-tapitrisany eran-tany àry no matoky fa harovan’Andriamanitra izy ireo rehefa handamina ny raharahan’ny olombelona ilay Fanjakany.
Izy ireo no hanatri-maso ny fahatanterahan’ilay vavaka modely nampianarin’i Kristy, na ilay Vavaka Nampianarin’ny Tompo, manao hoe: “Hatao etỳ an-tany anie ny sitraponao, tahaka ny any an-danitra!” (Matio 6:10) Hanao ahoana tokoa ny fiainana rehefa ho tia sy hankatò an’Andriamanitra daholo ny olona? Ho hitanao avy amin’ireto andininy ireto fa mety tsara ilay teny hoe ‘vaovao tsara.’
Rehefa hatao etỳ an-tany ny sitrapon’Andriamanitra
Mampanantena ny Baiboly fa tena hilamina ny tany rehefa hanjaka ny Fanjakan’Andriamanitra
Tena hilamina ny tany, fa tsy hoe hitsahatra fotsiny ny ady. ‘Mampitsahatra ady hatrany amin’ny faran’ny tany i Jehovah. Tapatapahiny ny tsipìka, ary potipotehiny ny lefona. Dorany ny kalesin’ady.’ (Salamo 46:8, 9) ‘Ny mpandefitra no handova ny tany, ka tena ho finaritra amin’ny fiadanam-be.’—Salamo 37:11.
Hahazo sakafo tondraka ny rehetra. “Hahavokatra be ny tany, ary na eny an-tampon-tendrombohitra aza dia ho be ny vokatra.”—Salamo 72:16.
Ho salama tanteraka ny rehetra. “Tsy hisy mponina hilaza hoe: ‘Marary aho.’ ”—Isaia 33:24.
Hanana trano mety tsara ny rehetra. “Hanao trano ny olona ka honina ao, ary hanao tanimboaloboka ka hihinana ny vokatra avy amin’izany. Tsy hanao trano hitoeran’olon-kafa izy, na hamboly zavatra hohanin’ny olon-kafa.”—Isaia 65:21, 22.
Hifarana ny fijaliana rehetra. “Eo amin’ny olombelona ny tranolain’Andriamanitra ... Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny mason’izy ireo, ka tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy intsony ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha.”—Apokalypsy 21:3, 4.
Mahafinaritra anao ve ireo fampanantenana ireo? Mampirisika anao àry ny Vavolombelon’i Jehovah mba handalina bebe kokoa ny Baiboly. Vao mainka izany hahatonga anao hiaiky hoe efa hifarana ny fijaliana vokatry ny fitondran’olombelona feno habibiana. Ho hitanao koa fa azo itokisana ny Baiboly ary tena avy amin’ny fanahy masin’Andriamanitra.—2 Timoty 3:16. *
^ feh. 4 Matetika no antsoina hoe “mpanjaka” koa ireo fanjakana resahin’ny Baiboly satria mpanjaka iray no nifehy azy.—Daniela 8:20-22.
^ feh. 18 Manazava bebe kokoa momba ny Fanjakan’Andriamanitra any an-danitra ny toko 8 sy 9 amin’ny boky Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?, navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah.
^ feh. 35 Raha te hahalala bebe kokoa momba ny Baiboly ianao, dia manatòna ny Vavolombelon’i Jehovah eny aminareo, na manorata any amin’ny adiresy iray eo amin’ny pejy 5, na jereo ny www.jw.org ao amin’ny Internet.